Mogadishu Journal » 2020 » October » 11
Muxuu Muuse Biixi ku soo arkay xarumaha Maamulka ee Magaalada Boorame? (Sawirro)
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo weftigii uu hoggaaminayey oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay xarumaha dawladdu ku leedahay magaalada Boorama, isagoo xadhigga ka jaray Buundo cusub oo...
Axmed Karaash oo la kulmay qoyskii uu ka baxay marxuum Cali Khaliif Galeyr (Sawirro)
Muqdisho:-Ku-Simaha Madaxweynaha Puntland Ahna Madaxweyne ku-xigeenka Dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ku qaabilay Muqdisho qoyskii alle ha u naxariistee Ra’iisal wasaarihii hore Cali Khaliif Galayr. Madaxweyne ku-xigeen Axmed Karaash ayaa qoyska la wadaagay...
W/Kuuriya oo soo bandhigtay ICBM Missile & Maraykanka oo ka naxay (Sawirro)
Gantaal cusub oo ay Kuuriyada Woqooyi ku soo bandhigtay dhoolatus milatari ayaa ah hanjabaad cad oo ka dhan ah difaaca Mareykanka iyo caqabad muuqata ee madaxweynaha xiga ee Mareykanka, sidaasi waxaa sheegay falanqeeyayaasha. Kim Jong Un ayaa daawaday gantaalaha qaaradaha isaga...
Sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukumadda federaalka Soomaaliya Amb Axmed Ciise Cawad ayaa la kulmay Ergayga qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr.James swan. Labada masuul ayaa kawada hadlay iskaashiga qaramada midoobay iyo Soomaaliya iyo sidoo...
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday qaar kamid ah Isbitaallada Dowladda, si uu ugu kuurgalo adeegyada caafimaad ee ay u fidiyaan bulshada Soomaaliyeed, maadaama Xukuumaddiisa ay ahmiyad gaar ah u leedahay soo...
Azerbaijan says nine dead in overnight Armenian shelling:
At least nine people have been killed in overnight Armenian bombardment in Azerbaijan’s second city of Ganja, the Azeri Prosecutor General’s Office said, less than 24 hours after a ceasefire in the disputed Nagorno-Karabakh territory was agreed. The Russia-brokered truce, put in...
Dadka doonaya in ay la kulmaan Ra’isul Wasaare Rooble oo lacag laga qaadayo !!
Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa safaf dheer ugu jira sidii ay ula kulmi lahaayeen Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si ay ugala hadlaan arimo inta badan iyaga u gaar ah. Xafiiska Ra’isul Wasaare Rooble ayaa laga...
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo maanta shaacisay dad badan oo ka bogsaday COVID19
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta shaacisay dad farabadan oo ka bogsaday Cudurka halista ah ee COVID-19, kuwaasi oo uu horey ugu dhacay. Warbixin ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in 5 maalin ee...
Qaar kamid ah Wadooyinka Muhiimka ah ee Muqdisho oo saakay xiran (Daawo Sawirada)
Muqdisho:-Waxaa saakay xiran qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, waxaana wadooyinkaasi lasoo dhigay gaadiidka dagaalka iyo ciidamo u badan kuwa koofiyo casta oo gaadiidka u diidaya in wadooyinkaasi maraan. Dad badan oo isugu jiray arday, bukaano iyo dad...
Agaasimaha IMF “Afrika waa in laga caawiyaa dhaqaale xumada uu sababay COVID19”
Agaasimaha IMF Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in adduunka waajib ku tahay in uu caawiyo Afrika sida dhibaatadan uga soo kabtaan. Afrika waxaa ay kamid tahay qaaradaha ugu saameynta yaraa feyraska corona. Baanka adduunka ayaa sheegay in 43 milyan ay hadda khatar ugu jiraan...
Dibad bax looga soo horjeedo maaska ama af xirka Covid-19 oo ka dhacay Magaalada London.
Boqolaal dibad baxayaal ah kuwaas oo ka soo horjeeda maaska ama af xirka Covid-19 ayaa socod ku maray bartamaha London ee xarunta UK. Dibab baxayaasha ayaa hor maray xafiiska ra,isulwasaaraha waxaana ay ku qeylinayeen in xoriyada ay muhiim tahay iyo xuquuq shaqsi ah oo aan dadka...